fanontaniana Evening All
1 taona 1 volana lasa izay #924 by mickod88
Mpandray vahiny amin'ny alina!
Efa mpikambana nandritra ny volana 6 aho tamin'ny farany tao Rikoooo, ary farany dia tonga nanambara ny tenako fa tsy dia lavitra loatra aho amin'izao fotoana izao ka afaka maka fotoana tsara P3D eo ambany fifehezako indray!
Mick isako, ary avy any Lossiemouth any Ekosy aho, izay manompo amin'ny Technique Avionics miaraka amin'ny RAF. Miandrandra ny mianatra bebe kokoa momba ny P3D avy amin'ny traikefa matihanina indrindra ary manantena ny ho fantatro amin'ny ho avy hafa amin'ny ho avy.
1 taona 1 volana lasa izay - 1 taona 1 volana lasa izay #925 by rikoooo
Tongasoa ato amin'ny forum, misaotra anao amin'ny fampahafantarana ny tenanao.
Manantena aho fa hankafy ity seha-pifanakalozana ity ianao, ny seha-pifaneraserana manontolo dia vaovao ary mila asa sasantsasany ka aza misalasala manoratra eto ary ento ny fahalalanao manan-danja amin'ny hafa.
Fanovana farany: 1 taona 1 volana lasa izay by rikoooo.
1 taona 1 volana lasa izay #926 by Gh0stRider203
Aye, izaho faharoa! Tongasoa, ary misaotra anao noho ny asa fanompoana nataonao!
Fotoana mamorona pejy: 0.182 segondra